Muhiimada Haasawaha Da'yart Qoys Kaab W/Q: Nada Yuusf Cumar
Wednesday June, 20 2018 - 00:46:17
Monday February 22, 2016 - 08:41:14 in by salman abdi
Marka aad is heshaan qofkii aad is lahayd nolosha ayaad wadaagi kartaa ama waad isla jaanqaadi kartaaan, tallabada ku xigtaa waa in aad kulantaan,
wada hadashaan, is barataan, is waraysataan, is kagana dhawaataan dadka kale.
Haddaba intani ma xuma oo waa wax wanaagsan hase ahaatee si aanay u xumaan oo ay wanaag wanaag lagu daray u noqoto waxa ay leedahay shuruud iyo qodobbo u yaalla oo ay tahay in aad ogaato si aad ugu guulaysato nolol wanaagsan, sidoo kalena aad xumaan uga badbaaddo.
Barta ay labada qaf ku kulmayaan waa in ay tahay mid nabada oo aan baqdin ku beerahayn labadooda, waa in ay dad ka ag dhawaadan, haddii ay aqal fadhiyaan waa in uu albaabku u furnaada, haddii kalena ay fadhiyaan goob aan shaki dhalin karin.
Ujeedada aan sidan u leenahay waxa weeye in ay ka digtoonaadan shaydaan, sababta oo ah marka laba qof oo is gayaa wada fadhiyaan waxa ay halis u yihiin shaydaan, si ay haddaba shaydaan uga nabad galaan waa in ay marka hore ka sii gaashaantan.
Wakhtiga iyo xilliga la kulmayaa waa muhiim, sida badanaa wanaagsan sharafta iyo diin jacayllkuna ku jiraa waa labada qof oo kulma wakhti maalina. Sida barqo ama casar. Habeenkii waa caadi hase ahaatee waxa ka wanaagsan Malinta, sababta oo ah habeenkii shaydaamiinta ayaa soo dareera sida uu Nabigeennu sheegay. Sidoo kale xumaantu badanaa waxa ay dhadaa habeenkii, haddaba mar haddaad idinku wanaag rabtaan waxa idiin wanaagsan xilliga iftiixnka ilayn xalaal iftin baa la qashaaye. Waxa ay sidoo kale maalintu muhiim u tahay Habalaha ama inan ta waayo inanta habeenku waa ku dhib.
Labadaa qodob ee hore ragga iyo dumarkuba way u siman yihiin, labadan danbe se dumarka ayay u gaar yihiin.
Qodobkanai waxa uu gaar u yahay gabadha, marka ay labada qof wada hadlayaan waxa waajib ah in aanay inantu hadalkeeda jajibin ama anay jiljilcin oo anay erayo dareen kicina ku hadal, sababta oo ah Alle ayaa yidhi "ha jajabinina hadalka si aannu idiin doonin ama idiin damaaciyin midka qalbigiisu bukaa, ku hadala hadal wanaagsan oo la garaganayo”. Surah Axsaab32.
Asal ahaanba gabadhu waa in ay marwalba labiskeeda ka dhigtaa Xijaab, ilayn baryo maha oo Alle ayaa innagu waajibiyaye. Haddaba marka ay nin gaya oo ajinabiya la kulmayso, waliba hawlo haasaawe oo guurna ugu tagayso arrirntu way ka wayntahay sidii hore, waxa waajib ku ah xijaabka oo ay sii adkaysato, cadar iyo is qurxinna way ka fogaanaysaa, ila faham ujeedada sidan loo leeyahay, waxa Alle inaga xarrimay sino iyo xumaan, si uu qofku xumaan uga dheeradana waa in uu ka fogaada wax kasta oo keeni kara. Sidaa awgeed dumarku iyaga oo markooda horeba dareen kicinta ragga u nugul haddana marka ay maryo khafiifa ama ku dhegsan xidhaan miyaanay suural gal ahayn in uu is badal yimaaddo. Sidoo kale shaydanna waakan oo waaba meelaha uu ka shaqaysto,
Ogoow walaashayeey shaydaan iyo naftubaa cadaw ayay kuu yihiine. Midna ogsoonoow nabi Maxamed waxa uu yidhi SCW ” Gabadhi cadar ka soo uro ee uu nin ka uriyo ma hesho urta jannada, iskaba daa galiddeedee”
Si haddaba aad noloshaada danbe ugu raaxaysato haku dagmin dhal dhalaalka yar ee adduunyo, mar walba noloshaada adduunyo ha noqoto ta aad ku gaadhayso nolosha Aaakhiro ee raaxada badan.
Rag iyo Dumarba Rabbi ha innoo danbi dhaafo wixii gefa ee aan soo samaynay, imikana xaqa iyo wanaagga ha inagu hunuusho isaga Dunuubta dhaafe.
Gudaha:-Qisada Soomaali Afduub Lagu Eedeeyey Oo Kanada La Geeyey Kaddib Markii Lagu Khiyaameeyey Heshiis Been Ah.
Canada:-Dagaalka ganacsiga oo noqday mowduuca ugu saameynta badan shirka G7.